September 2020 - MM Daily Life
ဖူးစာရှင်နှင့်တွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့် အချက်များ အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်။ တကယ့်အချစ်စစ်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက် လာပါတော့တယ်။ အချစ်စစ်က လူတွေကို ပန်းရောင်တိမ်တွေပေါ်မှာ မျော်နေသလို ခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ညလုံး နိုးကြားနေ စေနိုင်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တိုင်းလည်း တစ်ဘဝလုံး ပေါင်းဖက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေ နာကျင်မှုတွေကို ခံစားနိုင်ရပါမယ်။ ဒီနေ့ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ တစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်လာနိုင်မယ်” လေ့လာမှုတွေအရ အချိန်အကြာကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်၊ အတွေးတွေကို တစ်ယောက်က နားလည်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ … Read more
ခြေထောက် ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ လူတွေရဲ့အကြောင်း… လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခြေထောက်တွေ ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုရင် သင် ယုံပါ့မလား …? ဒါဟာ ရှေးကတည်းက ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထိုက်အလျောက်လည်း မှန်ကန်ပါတယ် …။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး တိုက်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် တခြားလူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပါ သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလိုက်ပါအုံးနော် …။ ၁။ အီဂျစ်” ခြေချောင်းလေးတွေ အားလုံးက မတိမ်းမယိမ်းလေးနဲ့ လှပပါတယ်။ တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်း အတိုအရှည်ကလည်း သိပ်မကွာပါဘူး …။ ခြေမကနေ ခြေသန်းလေးအထိ အားလုံးက အနိမ့်အမြင့် အစဉ်လိုက်အတိုင်း သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်မျိုးက လျှို့ဝှက်တတ်ပါတယ် …။ တစ်ကိုယ်တည်းနေတတ်တယ်၊ စိတ်အပြောင်းအလဲလည်း မြန်ကြပါတယ် …။ … Read more
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာရှိနေတဲ့ နှလုံးသားလမ်းကြောင်းက သင့်ရဲ့ အနာဂါတ်အချစ်ရေးကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသားလမ်းကြောင်းကိုတော့ (Love Line) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နှလုံးသားလမ်းကြောင်းရဲ့ပုံစံကတော့ လမ်းကြောင်းက နက်ရှိုင်းမယ်၊ ရှုပ်ထွေးမနေပဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားမယ်၊ အကျိုးအပြတ်မရှိတာမျိုးပါ။ နှလုံးသားလမ်းက တစ်ဆင့် သင့်ရဲ့အနာဂါတ် အချစ်ရေးကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုတော့…. နှလုံးလမ်းကြောင်းတိုနေရင်..(Fig 1) နှလုံးသားလမ်းကြောင်းက အရမ်းတိုမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ အနားမှာ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေ ရှိနေရင်တောင်မှ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဝေဒနာကို ခံစားနေရတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဆူးခင်းလမ်းလို အချစ်ရေးမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်။ ချောမွေ့တဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းမျိုးကို မပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါဘူး။ နှလုံးလမ်းကြောင်း ရှည်ရင်…(Fig 2) နှလုံးလမ်းကြောင်းရှည်တယ်၊ ဖြောင့်မတ်တယ်၊ ခွဲဖြာထွက်တာမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး … Read more
၁။ “ဒါန ကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ဆိုရင် ရေဖလား ထဲကို ရေထည့် လိုက်ပါ။ မျက်စိ နဲ့ မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်သို့ မမြှောက်လိုက် ပါနဲ့ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ပါ။လက်ကကိုင် ထားတဲ့ ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရားအား မျက်နှာ သစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သော အားဖြင့် မျက်နှာ သစ်တော်မူ ပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ၂။ “ဗုဒ္ဓနုသာတိ ကုသိုလ်” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ အသုံးပြုနေပုံ ကို စိတ်နှလုံးမှာ အာရုံပြုပြီး အရဟံကို အနက်(၃)ခုနဲ့ ပွါးလိုက်ပါ။ အရဟံ … Read more
လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ… ကိုယ်တွေ သဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ချစ်ပြီး အစစအရာရာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါ ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါပဲ …။ ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထပ်ကြသေးလဲလို့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာ ဦးမှာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း မကွဲချင်ပါဘူး။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့သူနဲ့ပဲ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းသင်းသွားမယ်လို့ ကိုယ်စီ တွေးထားကြမှာပါပဲ။ ချစ်သူသက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူ့အကြောင်း ၊ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သိလောက်ပြီလို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း အတူတူနေ … Read more
ဆံပင်အုံပါးသူတွေ ဆံပင် ပိုထူစေမယ့် နည်းလမ်း… လှပသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးတိုင်း အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ဆံပင်ဟာ တစ်လ လက်မဝက်ခန့် ကြီးထွားနေတာပါ …။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကြီးထွားမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံက ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းခံတွေနဲ့ ဗီဇအပါအဝင် များစွာသော အချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် …။ သင့်ဆံပင်ဟာ သင့်ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ အလေ့အကျင့်တိုင်း သန်စွမ်းမှု ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး မျှတတဲ့ ပုံမှန်အစားအသောက်က ရှည်လျားပြီး ပိုးသားလို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အဓိကဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ဒီဆေးနည်းက သင့်ဆံပင်ပိုမိုထူထပ်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဆံပင်ပိုထူစေမယ့် ဆေးနည်းလမ်းလေးကတော့… လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ ကြက်ဆူဆီ ထမင်းစား ဇွန်း (၂) ဇွန်း ကြက်ဥ အနှစ် (၁) … Read more
မိန်းမက အိမ်ကိုတသက်လုံးပြန်မလာဖို့နဲ့ ကွာရှင်းပေးဖို့ပြောကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာဆိုလာတဲ့ ဗေဒါ… လူရွှင်တော် ဗေဒါကတော့ ဗီဒီယို နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို …၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တောက်လျှောက်ရရှိခဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာတော့ ဗေဒါဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားတာဖြစ်ပြီး …၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ် ကိုင်လျှက် ရှိ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် …။ ယခု ရက်ပိုင်း မီဒီယာတွေ့ဆုံမှု တစ်ခုမှာတော့ ဦးဗေဒါက ကိုဗစ်ကာလ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကြောင့် မိန်းမက အိမ်ကို တစ်သက်လုံး ပြန်မလာဖို့နဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ပြောနေပြီလို့ ဆိုလာ ခဲ့ တာ ပါ …။ ဦးဗေဒါက “Quarentine ဝင်ဖို့ သံသယလူနာတွေကို … Read more
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာsharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ်ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးရတယ်အာ့ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘက်လက်မနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ် ပြီးရင် လက်ဗွေနားမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ် … Read more
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့အရောင်က တစ်ဆင့်သိနိုင်မယ့် သားအိမ်ကျန်းမာရေး အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လစဉ် ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ဓမ္မတာ မလာမီမှာ အဖြူဆင်းတာတွေကတော့ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဓမ္မတာလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖြူဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်အဆင်းကိုကြည့်ပြီး သားအိမ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သတိထားနိုင်ပါတယ် …။ ဒီတော့မှ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကြိုကြိုတင်တင် လုပ်နိုင်ထားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၁) အဖြူရောင်” အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်ရောင် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါပေမယ့် အနံ့အသက်ပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနံ့အသက် မပြင်းထန်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့မလိုပါဘူး …။ (၂) အ၀ါရောင်” အ၀ါရောင်တွေဆင်းရင် များသောအားဖြင့် ယားယံတာ၊ နာကျင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပြီး အနံ့အသက်ကတော့ … Read more
စက်ဆွဲစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကိုပျော့ပျောင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း… မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများက ဆံပင်ကို ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက်လုပ် ကြတာများပါတယ်။ တချို့က ဆံပင်ရေလှိုင်းပုံလေးတွေ လုပ်တာကို ကြိုက်ကြတယ်။တချို့ကျ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြောင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို စက်နဲ့ဆွဲပြီးလုပ်ရတာမလို့ ဆံကေသာကို အနည်းနဲ့ အများတော့ ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ် …။ အဲ့လိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ဆံကေသာကို ဖြောင့်စင်းချင်သူများအတွက် သဘာဝအတိုင်း ပေါင်းတင်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် ။ ပေါင်းတင်တာဆိုတဲ့အတွက် ခေါင်းလျှော်သလို လျှော်လို့မရပါဘူး။ဆံကေသာမှာ နှံအောင်လိမ်းထားပြီးမှ အချိန်တစ်ခုထားပြီး လျှော်ရမှာပါာပထမဆုံး ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ ပြောပြပါမယ် …။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း လေးတွေကတော့…. – ကြက်ဥ – ရှားစောင်းလက်ပက် – သံလွင်ဆီ – ပျားရည် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ … Read more